विवेकको आवश्यकता - Laltin.com
Bibek ko Awasyakta
एक व्यक्तिले घरमा बिरालो र कुकुर पालेको थियो । बिरालो धेरै कराउथ्यो । दिनरात म्याँउ-म्याँउ गरि रहन्थ्यो । मालिकलाई मनमा खटपट हुन थाल्छ । उ सोच्न थाल्छ की यो बिरालो म्याँउ – म्याँउ किन गरिरन्छ । मालिक दिनभर कामको थकानले आएको हुन्छ रातमा राम्रोसँग सुत्न पनि बिरालो कराएर दिदैन । जब एकदिन बिरालो म्याँउ-म्याँउ कराउदै थियो मालिकले उसलाई कुट्दै भन्छ, ‘के दिनभरी रातभरी म्याँउ-म्याँउ गरिरहन्छस ?’
यो सबै कुरा कुकुरले देखि रहेको हुन्छ । कुकुरले सोच्छ यो बिरालो धेरै कराएर पिटाइ खायो । अब म कराउदिन भुक्दिन । कुकुर मौन व्रत बस्यो । रातमा घरमा चोर पस्यो । घरमा चोरी भयो बिहान भयो, मालिकले लाठीले कुकुरलाई कुट्न थाल्यो । मालिकले भन्यो, ‘तँलाई मैले केका लागि पालेको हुँ ? यतिका खाना केका लागि तलाई खुख्वाएँ ? यहि दिनको लागि तलाई पालेको थिए कि चोर आयोभने भुकेर जानकारी दिन सकोस्‌ । तँ त चुपचाप रातभर बसिस्‌ ” यति भन्दै मालिकले कुकुरलाई कुट्न थाल्यो । चोर आउँदा नभुक्दाको कारण कुकुरले कुटाई खायो ।
अब प्रश्न उठ्छ । चुपचाप बस्नु राम्रो कि कराउन राम्रो ? के चाहिँ राम्रो त? हामीले यो विवेक लगाउनुपर्छ कि कुनै ठाउँ चुपचाप बस्नु उचित हुन्छ र कुनै ठाउँ नबोलि बस्दा हामी पछाडी पररिन्छ । बोल्नु पनि जरुरत छ र चुपचाप बस्नुपनि राम्रो हो । सुझबुझका साथ सहि ठाउँमा सहि कुरा बोल्नु पर्छ भन्ने नै यस कथा को नैतिक शिक्षा हो।
Next: विश्वासघाती चोरहरु